चीन इराक-सूजौ Sohologistics कं, LTD.
होम>सेवा लाइन>मध्य पूर्व रेखा>इराकमा चीन
इराकमा चीन बाट ढुवानी
हाम्रा धेरै ग्राहकहरू इराकमा आधारित छन्, त्यसैले यो हाम्रो लागि एक धेरै महत्त्वपूर्ण बजार भएको छ। हामीले COSCO, OOCL, APL, EMC, MSK, र HMM जस्ता वाहकहरूसँग सम्झौता दरमा हस्ताक्षर गरेका छौं। इराकको कुनै पनि पोर्टमा चीनबाट शिपिंग गर्दा यी सम्बन्धहरूले हामीलाई तपाईंलाई धेरै राम्रो भाडा दरहरू प्रदान गर्दछन्।
एसएलएल साझेदारको रूपमा, चीनबाट इराकमा सामान ढुवानी गर्न धेरै सजिलो हुनेछ, तपाइँले आफ्नो सामानहरू हामीसँग मात्र छोड्नुपर्नेछ, र हामी बाँकी गर्छौं। SHL को लक्ष्य तपाईंको इराकमा चीनबाट उत्तम फ्रेट फारवर्डर हुनु हो। अहिले उत्तम उद्धरणको लागि सोध्नुहोस्।
रो-रो / ब्रेक थोक शिपिंग चीनबाट इराकमा
SHL ले रोरो रोरोमाफि BREAKBOLK प्रदान गर्न सकीन्छ उपकरण, सवारी साधन र भारी उपकरणहरु चीन देखि इराक गर्न को लागी। हामी एक रोक्न र अनुकूल समाधान प्रदान गर्न सक्छौं।
चीनबाट इराकमा समुद्री ढुवानी ढुवानी
हामी प्रतिस्पर्धी सागर फ्रेट दरहरू, र उत्तम शिपिंग समाधानहरू प्रदान गर्न सक्दछौं, तपाईंको आवश्यक प्रसारण समयको आधारमा चीनबाट इराकमा पोर्टमा शिपिंग गर्दा (विशेष रूपमा अन्तर्देशीय बन्दरगाहमा)।
इराकमा चीनबाट एयर फ्रेट शिपिंग
हामी तपाईंको समयको आवश्यकताको आधारमा तपाईंको ढुवानीको लागि सबैभन्दा व्यावहारिक एयरलाइन छनौट गर्नेछौं। इराकमा चीनबाट एयर फ्रेटको लागि SHL तपाईको उत्तम फ्रेट फरवार्डि solution समाधान हो।
इराकमा चीनबाट सस्तो ढुवानी
यो तपाइँ चीनबाट इराकमा कति सामानहरू ढुवानी गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ, यदि तपाई एकदम सानो नमूनाको साथ हतार गर्नुहुन्न भने, तपाईले चिनियाँ पोष्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा डीएचएल जस्तै एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईसँग धेरै सामानहरू छन् भने SHL लाई सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईले हाम्रो उत्तम शिपिंग पाउनुहुनेछ। इराकमा चीनबाट दर।
इराकमा चीनबाट कति लामो / कति शिपिंग
इराकमा चीनबाट ढोका ढुवानी
व्यक्तिगत वा व्यापार आवश्यकताको लागि, हामी तपाईंको लागि ढोका ढोका ढुवानी सेवा प्रदान गर्न सक्दछौं, जसमा इराकमा भन्सार निकासी समावेश छ।
इराकमा चीनबाट तपाईंको सर्वश्रेष्ठ फ्रेट फारवर्डर
इराकमा चीनबाट प्रतिस्पर्धी सागर र एयर फ्रेट दर प्रदान गर्नुहोस्।
इराकमा मुख्य एयरपोर्टहरू
Basrah अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बगदाद अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट
Sulaymaniyah अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट एरबिल अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट
मोसुल अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट अल नजाफ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट
इराकमा चीनबाट शिपिंगका मोडहरू
जब तपाई इराकमा चीनबाट आयात गर्नुहुन्छ, तपाईले धेरै शिपिंग मोडहरू रोज्न सक्नुहुन्छ।
शिपिंग को मोड मा निर्भर गर्दछ:
१. ढुवानी लागत
२. प्रकार र सामानको प्रकृति
Space. स्पेस उपलब्ध छ, अर्थात् भोल्युमेट्रिक आकार समुद्री ढुवानीमा कुञ्जी हो
Whether. चाहे तपाईं सागर फ्रेट वा एयर फ्रेटको लागि जाँदै हुनुहुन्छ
त्यसोभए, कुन विकल्पहरू तपाईंले विचार गर्नुपर्छ?
हामी संग छ:
रोल-अन / रोल-अफ शिपिंग
BREAK बल्क शिपिंग
पूर्ण कन्टेनर लोड (FCL) ढुवानी
कन्टेनर लोड (LCL) शिपिंग भन्दा कम
गेज (OOG) ढुवानी बाहिर।
चीनबाट इराकमा पठाउनको लागि म कुन पोर्ट प्रयोग गर्ने?
चीनमा धेरै पोर्टहरू छन् र मैले यस गाईडमा तिनीहरू मध्ये धेरै हाईलाइट गरें।
जे होस्, औंठाको नियमको रूपमा, तपाइँको आपूर्तिकर्ता नजिक भएको एक प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंले आफ्नो फ्रेट फारवर्डरसँग यसबारे छलफल गर्नु आवश्यक छ।
किनकि तपाईंलाई पोर्ट चाहिन्छ जुन तपाईंलाई इराकमा सिधा लिंक गर्न सक्दछ
यस तरिकाले तपाईले समय र पैसा दुबै बचाउनुहुनेछ।
चीनबाट इराक पठाउनको लागि जम्मा गरिएको समय के हो?
सामान्यतया, ट्रान्जिट समय धेरै कारकहरूको कारण धेरै फरक हुन्छ।
तपाईं ट्रान्जिट अवधि र अन्य रसद प्रक्रियाहरूको आधारमा समय सीमा तय गर्न सक्नुहुनेछ।
उदाहरण को रुपमा:
कागज र ह्यान्डलिंग खेपमा दुई हप्ता लाग्न सक्छ।
शिपिंग केहि घण्टा देखि केहि दिन सम्म फरक पर्न सक्छ शिपिंग मोडमा निर्भर गर्दछ।
आपूर्तिकर्ताबाट उत्पादन सोर्सिंग केहि दिन वा महिना लिन सक्दछ।
संक्षिप्तमा, तपाईं यी सबैमा कारक लिन सक्नुहुनेछ यो अनुमानित समय लिनको लागि चीनबाट इराकमा जहाज पठाइन्छ
"बिट माय फ्रेट कोट" आयात गर्दा हामी के भन्न खोज्छौं?
हराउनुहोस् मेरो फ्रेट उद्धरण त्यो हो जब तपाईं सीधा व्यावसायिक फ्रेट फारवर्डरसँग तपाईंको क्षेत्रमा राम्रो ज्ञानको साथ व्यवहार गर्नुहुन्छ।
सबै सोधपुछहरू स्थानीय एजेन्टद्वारा व्यवहार गरिनेछ जसले तपाईंको तर्फबाट उत्तम सम्झौताको खोजी गर्नेछ।
त्यसो भए, सबै सम्झौता एजेन्ट र आफु बीचमा हुनेछ।
बीट मेरो फ्रेट उद्धरणमा, कुनै पनि लेनदेनको लागि कुनै कमीशन लिईदैन र तपाईं धेरै बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
एक इजाजतपत्र बीट मेरो फ्रेट कोट फ्रेट हुनको लागि, फ्रेट फारवर्डर या त एक राष्ट्रिय फ्रेट फर्वार्डिंग कम्पनी संघको सदस्य हुनुपर्दछ।
साथै, फ्रेट फारवर्डरले उच्च स्तरको व्यावसायिकता चित्रित गर्नुपर्दछ।
धेरै जसो केसहरूमा ती FIATA वा IATA कार्गो एजेन्टका सदस्यहरूद्वारा स्वीकृत हुन्छन्।
म चीनमा आधारित फ्रेट फरवार्डिंग कम्पनीमा कसरी भुक्तानी गर्ने?
चीनमा रहेको कम्पनीको बैंक खातामा भुक्तान गर्न कसैले पैसा ट्रान्सफर प्रणाली प्रयोग गर्न सक्दछ।
यी मालवाहक फर्वार्डि companies कम्पनीहरूका अधिकांश एचएसबीसी (ह Hongक Kong र शंघाई बैंकिंग कर्पोरेशन) जस्ता अग्रणी बैंकहरूसँग खाताहरू हुनेछन्।
फ्रेट फारवर्डर सुविधा र छिटो कुनै पनि भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्दछ।
मसँग विधेयकको बिल छैन (B / L), म के गरूँ?
तपाइँको अनुमति आवेदनमा "बिल अफ लाडिंग (B / L) नम्बरको ठाउँमा कार्गो बुकिंग सन्दर्भ नम्बर घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यो हो, यदि तपाईंलाई बिलि Ladको बिल दिइएन भने।
तपाईले जानकारी अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले एक पटक मात्र संशोधन गरिएको आवेदन पेश गरेर बिलिंग अफिस अफ बुड गर्नुभयो।
म कसरी चीनबाट मेरो आयातको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न सक्छु?
यहाँ एक पेशेवर र अनुभवी फ्रेट फारवर्डर भाडामा लिनु मात्र एक मात्र समाधान हो।
तिनीहरूले सबै प्रक्रियाहरू ह्यान्डल गर्ने छन्, यो लोडिंग, लेबलि,, यातायात वा सफाया हुन।
त्यस्ता मालवाहक अग्रेषकहरूलाई इराकमा चीनबाट आयात गर्ने नियम र कानूनको जानकारी छ
वास्तवमा, एक पेशेवर फ्रेट फारवर्डर भाँडो तपाईं दुवै पैसा र समय बचत हुनेछ।